यस बर्षको मोति पुरस्कार सिग्देल र रानाहँछालाई
१९ भदौ । युवाकवि मोतीराम भट्टको स्मृतिमा स्थापित युवावर्ष मोती पुरस्कार २०७५ युवा साहित्यकारद्वय केशव सिग्देल र चन्द्र रानाहँछालाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ । पुरस्कार स्वरुप उनीहरुले स्वर्ण पदक र ५० हजार रुपैया प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय युवा सेवा कोषले जनाएको छ…
गायक हरिप्रसाद रिमालको निधन
१५ भदौ । गायक तथा नाट्यकर्मी हरिप्रसाद रिमालको निधन भएको छ । ९३ वर्षीय रिमालको गएराति आफ्नै निवास बानेश्वर हाइटमा निधन भएको हो । रिमालका ‘फगत एक नजरमा कसैले लियो मन’ लगायत गीत चर्चित छन् । कतिपयले रिमाललाई रेडियो नेपालको पहिलो गायक भन्ने गरेका भए…
सुर्खेतका सर्जक ढकाल र विष्टको मौलिक तीज गीत बजारमा
३० साउन । सुर्खेतका दुई सर्जकले मौलिक लोकभाकाका तीज गीत बजारमा ल्याएका छन् । तीज गीतमा उत्कृष्ट भई विभिन्न पुरस्कार जित्दै आएका कलाकार हरि विष्टले यसपटक माइती देश सम्झेर भन्ने मौलिक गीत बजारमा ल्याएका छन् । गीतमा सुर्खेतकै चर्चित मोडल दिपाशा विसीको शब्द…
एकल महिलाको भूमिकामा काजोलको नयाँ फिल्म (ट्रेलर सहित)
२२ साउन । बलिउडकी चर्चित अभिनेतृ काजोल नयाँ फिल्म इला हेलिकप्टरमा देखिदैछिन । सन् २०१५ मा दिलवाले फिल्म भन्दापछि उनका प्रशंसकहरूले नयाँ फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । प्रदीप सरकारले निर्देशन गरेको फिल्म ईला हेलिकप्टरको ट्रेलर काजोलको ४४औं जन्मदिनमा आइतवार सार्वजनिक गरिएको छ…
कर्णालीका दुई पत्रकारका मनछुने तीज गीत (भिडियो सहित)
१६ साउन । हिन्दु नारीहरुको महान चाड हरितालिका तीजमा जेठदेखि नै गीततहरु बजारमा आइरहेका छन् । यसैविच पत्रकारीतालाई मुल पेशा बनाएका कर्णाली प्रदेशका दुई पत्रकाहरुका गीतले पनि चर्चा कमाएका छन् । पत्रकार धनबिर दाहाल, रुकुम- ‘चेलीको ममर्’ दाहालका यस अघिका गीतले समाजमा छुट्टै…
कुसुम दाहालको ‘६० हजारको साडी ?’
१६ साउन । गायिका कुसुम दाहालले यस पटकको तीजमा भट्टराईको तीजको कोसेली ‘६० हजारको साडी’ ल्याएर आएकी छन् । प्रवासी गायिका दाहालको यो तेस्रो गीत हो । यस अघि दुई वटा गीत रिलिज गरेकी कुसुमले दुई महिना पहिले ‘नव कुसुम’ नामक एकल म्युजिक…
१५ साउन । नेपाली महिलाहरुको महान चाड तीज नजिकिँदै गर्दा सुर्खेतमा जन्मेर कला क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएका सर्जक, मोडल तथा गायिकासंग सेरोफेरो चौतारीका लागि गरिएको तीज विशेष कुराकानी । नन्दा बस्याल, मोडल तथा निर्देशक आजभोली तीज गीतको निर्देशनमा धेरै व्यस्त छु ।…
दीपिका पादुकोण र रणविर सिंहले विवाह गर्ने ठाउँ कस्तो छ ?
१२ साउन । बलिउडमा धेरै हेर्न चाहेको विवाह मध्ये एक हो, दीपिका पादुकोण र रणविर सिंहको विवाह । रामलिलाका यी जोडीको विवाहको चर्चा पछिल्लो एक वर्षदेखि हुँदै आएको छ । यो जोडिको विवाह आउँदो नोभेम्बरमा हुँदैछ । बलिउडमा रुचाइएको यो जोडीले…
ओ ! शेरबहादुर तिमीसँग के छ ?
ओ ! शेरबहादुर तिमीसँग के छ ?'मार्शी प्रसाई'सँग आज देश छसमृद्धिका अचूक खाका छसूनको कचौरा चाँदीको चम्चा छ खाने मार्शी चामाल छझर्के थाल छतेही थालमा एकै टेबलमा बसीसँगै खाने साथमा दाहाल र ओली छ
रेखाले नचाइन् जाजरकोटका सय महिला, आफू चाहीं धरान जान धनगढीमा रेल कुर्दै (भिडियो)
१ साउन । आउँदै गरेको चलचित्र ‘मालिका’ को ‘ओ बाज्या, धनगढीमा रेल आको दिन म धरान जान्या हो’ गीत सार्वजनिक भएको छ । दरबारमार्गको राइजिङ मलको हलमा मंगलबार नेपाली चलचित्र ‘मल्लिका’ को गीत ‘सार्वजनिक भएको हो । कार्यक्रममा नायिका रेखा थापाले चलचित्रकर्मी भएको…